३५ वर्षमा बिहे तर अहिलेसम्म कुमारी - Lekbesi Khabar
३५ वर्षमा बिहे तर अहिलेसम्म कुमारी
मेरो मुटु प्रेम र चाहनाका लागि जलिरहन्थ्यो। तर म एक्लोपनले घेरिएकी थिएँ। बेला–बेला मलाई लाग्थ्यो कि म मोटी भएकीले यस्तो भएको हो। के पुरूषहरू मोटी महिलालाई घृणा गर्छन् ? के मेरो तौल नै मैले विवाहका लागि उपयुक्त केटा नपाउनुको कारण हो ? के म साँच्चै नै जीवनभर एक्लै रहनुपर्छ ? के म सधैँ कुमारी नै रहन्छु रु यस्ता प्रश्नहरू हरबखत मेरो दिमागमा खेलिरहन्थे। अन्ततः जब म ३५ वर्षकी भएँ। कसैगरी ४० को दशकका एक पुरूष विवाह गर्न आए। हाम्रो कुरा छिन्ने बेलामा मैले मेरा भावना उनीसँग व्यक्त गरे। तर उनले न ध्यान दिए न त जवाफ। उनी अत्तालिएको जस्तो लाग्यो। भुइँतिर निहुरिएर उनी चुपचाप बसिरहे, टाउको पनि खासै माथि उठाएनन्।
त्यो दिन बिदा थियो। अस्वभाविक रुपमा उनी बिदाको दिनमा पनि घरमा बस्दैन थिए। उनी यात आफ्ना साथीको घरमा जान्थे या आफ्ना आमाबुबालाई बाहिर लग्थे। तर भाग्यवश त्यो दिन उनी घरमा नै बसे। म उनको कोठामा छिरेँ र ढोका बन्द गरेँ। उनी आफ्नो ओछ्यानबाट जुरुक्क उठे। म उनको नजिक गएँ र आदरपूर्वक सोधेँ, तपाईँलाई म मन पर्दिनँ हो ? हामी एक पटक पनि नजिक भएका छैनौँ, तपाईँले आफ्ना भावनाहरू शब्दमा पनि व्यक्त गर्नुभएन। तपाईँको समस्या के हो ?
उनले जवाफ दिए, मलाई कुनै समस्या छैन। उनले के पनि भने भन्दा मैलै उनको ध्यान तान्नुपर्छ र त्यसो गरेर उनको नजिक हुनुपर्छ। मैले निकै आँट गरेँ । मेलै कल्पना गरेकी थिएँ कि मेरो स्पर्शले परिणाम दिनेछ तर म निराश भएँ। मलाई थाहा थिएन र यसबारे कसलाई सोध्ने रु मलाई एकदमै लाज लाग्यो। त्यसले मलाई सतायो। जसरी महिलाको सुन्दरताबारे पुरूषहरू धारणा बनाउँछन्, मैले मेरा पतिको शरीर हेरेर धारणा बनाउन किन मिल्दैन ? मैले पतिबाट अपेक्षा गर्नु गलत थियो र ? त्यसपछि मलाई थाहा भयो कि उनी नपुंसक थिए र हाम्रो बिहेभन्दा पहिले डाक्टरले उनी नपुंसक भएको पुष्टि गरिसकेका थिए।
म त्यस्ता पुरूषदेखि टाढै बसेँ। उनीहरूमध्ये कसैले मसँग बिहे गर्न चाहेको थिएन र प्रतिबद्ध सम्बन्ध बनाउन चाहेको थिएन। मसँग चाहना, सपना र भावनाहरू छन्। तर मलाई माया गर्ने, मेरो ख्याल गर्ने, मेरा भावनाहरू बुझ्ने र मसँग जीवन बिताउने व्यक्तिसामु मात्रै म यी कुराहरू व्यक्त गर्न चाहन्छु। म त्यस्तो व्यक्तिका लागि प्रतीक्षरत छु। त्यस्तो व्यक्ति नभेटुञ्जेल मैले आफ्ना साथीहरूको यौ नजीवनबारे गोप्यरूपमा कुराकानी गरेर आफूलाई सन्तुष्ट पारिरहेकी छु। मैले जे गरेकी छु त्यसका लागि मबारे धारणा बनाउने मानिसहरूको कुनै कमी छैन। मलाई विश्वास छ ती मानिसह
२५ फाल्गुन २०७६, आईतवार १२:३८ March 15, 2020
नेपालबाट अस्ट्रेलिया गएका युवामा कोरोनाको संक्रमण
आमा जङ्गलमा घाँस, दाउरा गर्न गएको बेला दाइले गरे भाइको हत्या